Ekpere nye Saint Charbel. ? Maka ihe isi ike, ịhụnanya na ndị ọrịa
7 Mingụ Nkeji
Ekpere Saint Charbel. Ekwuru na St. Charbel nwere ike inyeghachi nne nwatakịrị nwanyị na-arịa ọrịa ọjọọ egwu. Ihe mere eme na-agwa anyị na nwanyị a enweghị okwukwe na otu ụbọchị, ụkọchukwu dụrụ ya ọdụ ka o mee ekpere ka senti charbel iji nyere gị aka na ahụike gị.
Agbanyeghị, nwanyị ahụ kwenyesiri ike na ọ nweghị onye na-anụ ekpere ya, na mnwale ikpeazụ, ugbu a ọ fọrọ nke nta na-enweghị ike, ọ welitere ekpere a ma nata ọrụ ebube ọ nọ na-eche kemgbe.
Dị ike, dị ike na naanị ngwaọrụ anyị n'oge ndị ahụ mgbe o yiri ka olileanya adịghịzi, ekpere bụ naanị ihe ndị ọzọ.
1 Ekpere Saint Charbel
1.1 Ekpere Holy Charbel maka nsogbu siri ike
1.2 Ekpere ọrụ ebube nye Saint Charbel maka ịhụnanya
1.3 Ekpere nke Saint Charbel maka ndi oria
1.4 Elu ebube di ebube maka oru
Tupu anyị ekpee ekpere maka Saint Charbel, anyị ga-ahụ onye nsọ a.
Kọọ akụkọ na aha ya bụ Chibuzor Okonkwo Okonkwo Amụrụ ya n’obodo dị na Lebanọn n’afọ 1828.
Ọ raara onwe ya nye n'okpukpe, nyefee ya ahụ na mkpụrụ obi ma bụrụ onye a maara dị ka onye Maronite na mgbe ọ banyere n'otu n'ime ebe obibi ndị mọnk a ọ natara aha Charbel na 1859 a họpụtara ya ụkọchukwu.
Si ebe ahụ Ọ gara n'ihu na ndụ ya kpamkpam na okwukwe yanwere Dios, ụka y l ekpere. Onye na - ekwusa okwu ahụ bụkwa onye na - azụ mmadụ.
Ruo afọ iri na isii o biri n'ụlọ obibi ndụ San Marón ma chefuo banyere ezinụlọ, ụlọ, ndị enyi ya na ala ya.
N’oge ọ nwụrụ, ụfọdụ mmadụ na-ekwu na site n’ili ya, nke dị n’ili nke otu ebe obibi ndị mọnk ya, ọkụ ndị dị ịtụnanya pụtara, ihe dịịrị bụ ọtụtụ ụbọchị.
Na ndụ, enwere m onyinye nke ọgwụgwọ nke Chukwu nyere ma mgbe ọ nwụsịrị, ọ gara n’ihu na-agwọ ndị mmadụ.
Ndị kwere ekwe bidoro ileta ili ya mgbe otu ụbọchị wepụrụ ya n'ihi ọkụ, ha chọpụtara na akpụkpọ ya na-agbaze na ọbara na-agbapụta n'ahụ ya.
Kemgbe ahu enwere otutu ndi natara ọgwụgwọ site na ajọ ọrịa.
Ekpere Holy Charbel maka nsogbu siri ike
Oh mma dị nsọ, gọzie Saint Chharbel,
Chineke kpọrọ ya ibi naanị ya,
n'ihi na ọ bụ naanị n'ihi na ọ hụrụ ya n'anya,
nke ahụ jiri penite na agụụ,
na mmụọ nke Eucharist,
I jiriwo obe na gbahapụ gị,
Jiri okwukwe gị mee ka ìhè nwuo n'okporo ụzọ anyị,
Site n'iku-ume-Gi me kwa ka okwukwe ayi guzosie ike.
Saint Barbara nwa Chukwu,
na na hermitage, ewezuga ihe ọ bụla dị n'ụwa
na ezigbo ịda ogbenye na ịdị umeala n'obi,
ị hụrụ ahuhu nke aru na nkpuru obi
ịbanye na mbara igwe dị ebube,
kuziere anyị idu ihe isi ike nke ndụ
ndidi na ume,
ma zọpụta anyị n'ihe ọjọọ niile
Anyị enweghị ike iguzo
Saint Barbara, senti ọrụ ebube
na onye arịrịọ dị ike,
Ejiri m obi ike nile nke obi m bịakwute gị
ịrịọ enyemaka gị na nchedo gị n'ọnọdụ a siri ike,
Ana m arịọ gị ka nye m amara ngwa ngwa
nke m choro nke ukwuu taa,
Otu okwu sitere na gị nye ịhụnanya gị, Jizọs kpọgidere n'obe,
Onye Nzọpụta anyị na Onye Mgbapụta,
O zuworo Ya imere m ebere
ma zaa ngwa ngwa n’arịrịọ m.
Virtuous Saint Barbara,
gị onye hụrụ Eucharist Nsọ n'anya,
na i riri nri nke Okwu Chineke
na Ozi Nsọ,
na i rapuru ihe ahu nile
nke ahụ ga-ekewapụ gị n'ịhụnanya nke Jizọs Kraịst bilitere
Nakwa nne ya dị nsọ, bụ́ Meri Nwa agbọghọ.
ahapụkwala anyị n’enweghị ngwọta ọsịsọ,
ma nyere anyị aka ịmatakwu Jizọs na Meri,
ka okwukwe-ayi ba uba,
ijere gị ozi nke ọma ma nwee ike ịnụ olu Chineke,
Mezuo uche ya ma biri n’ịhụnanya ya.
Site na mgbe mbu amara banyere nwatakiri nwatakiri nke natara oru ebube nke ọgwụgwọ mgbe o chere na o nweghi nchekwube, Saint a aburula onye n'ụzọ ọrụ ebube maka okwu ikpe siri ike, ndi nke echere na ha enweghi uzo obula.
Ọrụ ebube ọbụna mgbe ọ nwụsịrị, n’ihi na site n’ahụ ya na-apụta ihe mmanụ nwere ike ịgwọ ọrịa bụ ọrụ ebube.
Catholicka Katọlik na-enwe mmiri a, a na-akpọkwa ya ihe nnweta nke Sn Charbel, senti nke ikpe ndị siri ike.
Ekpere ọrụ ebube nye Saint Charbel maka ịhụnanya
Nna Charbel hụrụ n’anya nke-ọma, gị onye na-enwu dị ka kpakpando na-enwu na mbara igwe nke nzukọ, na-akọwa ụzọ m, ma na-ewusi olileanya m ike.
A na m ario gi amara ka (…) ariọchitere m n'ihu Onye-nwe-anyị kpọgidere n'obe, onye ị na-asọpụrụ mgbe niile. Saint Charbel, ihe atụ nke ndidi na ịgbachi nkịtị, na-arịọchitere m arịrịọ.
Oh! Onye-nwe-ayi Chineke, Gi Onye doro Saint Charbel nsọ ma nyere ya aka ka o buru obe ya, nye m obi ike iji nagide ihe isi ike nke ndụ, jiri ndidi na gbahapụ maka uche gị dị nsọ, site na ịrịọchitere Saint Charbel, ka be dịrị ebighebi…
Ewoo! Nna hụrụ onwe ya n’anya, San Charbel, eji ntụkwasị obi m niile tụgharịa gị.
Ya mere, site na ike ịrịọsi arịrịọ gị n'ihu Chineke, ị nyere m amara m na-arịọ gị ...
(debe iwu gị maka ịhụnanya)
Gosi m mmetụta ịhụnanya gị ọzọ.
Ewoo! Saint Charbel, ubi nke omume ọma, na-arịọchitere m arịrịọ.
Ewoo! Chukwu, Gi onye nyela St. Charbel amara nke ime ka Gi, nyem aka enyemaka gi, ka I towanye na nzukpo nke ndi Kristi.
Meere m ebere, Ka m wee too gị ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ masịrị gị ekpere Ọrụ ebube dị na Saint Charbel maka ịhụnanya?
Ọ hapụrụ ịhụnanya nke ndị di na nwunye, ndị ezinụlọ na ndị enyi iji nye onwe ya ezigbo ịhụnanya nke ukwuu nke Chineke.
Nke a bụ ihe mere St. Charbel arịrịọ maka ihunanya, nihi na onwere onye kariri onye obula mara ihunanya nke Chineke bu nke kachasi n’anya nke di.
Enyemaka dozie nsogbu siri ike n’ime ezinụlọ ma nwee ike ịchọta ezi ịhụnanya, nke a n’agbanyeghi ọtụtụ olileanya ị nwere ma ọ bụ ma ọ bụrụ na niile efuola, ọ bụ ọkachamara na ọnọdụ agaghị ekwe omume.
Ekpere nke Saint Charbel maka ndi oria
Ewoo! Nsọ dị nsọ.
Gị onye jiri ndụ gị nọrọ naanị ya, jiri nwayọ wewepu hermitation.
Na ị na-echeghị ụwa ma ọ bụ n'ọ theirụ ha.
Na ị nọ ugbu a n'aka nri nke Chineke Nna.
Anyi ario Gi ario aririọ anyi, ka O setipu aka ya di ngozi ma nyere anyi aka. Mee ka uche anyị dị nkọ. Mụbaa okwukwe anyị.
Mee ka uche anyi si n’iru gi rue n’iru anyi na ndi senti niile.
Oh Saint Charbel! Site na ike ịrịọ arịrịọ gị, Chineke Nna na arụ ọrụ ebube ma rụọ ọrụ ebube karịrị nke mmadụ.
Nke ahụ na-agwọ ndị ọrịa ma weghachiri ndị iwe ihe kpatara ya. Nke ahụ na-eme ka ndị ìsì hụ ụzọ ma na-emegharị ndị ngọngọ.
Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, jiri obi ebere lee anyị anya, nye anyị amara anyị rịọsiri gị arịrịọ ike maka ịrịọ arịrịọ ike nke Saint Charbel, (Lee ihe arịrịọ (s)) ma nyere anyị aka ime ihe ọma ma zere ihe ọjọọ.
Anyi na ario aririo gi n’oge niile, n’oge awa anyi nwụrụ, Amen.
Nna anyị, Hail Mary na Gloria Saint Charbel na-ekpe ekpere maka anyị.
Jiri nke a ike nke ọrụ ebube abụrụ St. Charbel maka ndị ọrịa na ịrịọ maka amara.
A kụrụ Saint Charbel ma tinyezie ya ebe ọ bụ na ọ bụ ya kpatara ọtụtụ puku ọrụ ebube n ’ụwa dum.
Site na ọrụ ebube mbụ ọ mara, o gosipụtara na onyinye enyerela ya otu oge ahapụbeghị ahụ ya ọbụna mgbe otu ọnwụ ahụ gasịrị.
Ekpere St. Charbel maka ndị ọrịa bụ ọrụ ebube, ụka Katọlik na-echekwa ọgbụgba nke ọtụtụ ndị kwere ekwe na-ekwu na ha natara ọrụ ebube site na St. Charbel kwa ụbọchị, ha na-agbakwunye ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ banyere ndị nwetaghachiri ma mee ka okwukwe ha sie ike. nke otu n’ime ọrụ ebube ndị a.
Elu ebube di ebube maka oru
'Onye nweayi Jisos, bu onye ariochita na nsogbu nile di ichiche, choputaram oru nke m'mezuru onwe m dika mmadu na ezin'ulom ezughi oke n'ihe obula nke ndu.
Debe ya n'agbanyeghị ọnọdụ na ndị ọjọọ.
Na ọ bụ ya ka m na-enwe ọganihu na ndụ m oge niile na-enwe ahụ ike na ike.
Na kwa ubochi obula m gbaliri irite uru nye ndi gbara m gburugburu ma ana m ekwe nkwa igbasa ofufe gi dika ngosipụta nke obi ekele m na amara gi.
Ekpere nke Saint Charbel maka oru di ezigbo ike!
N'okwu ikpe ị nwekwara ike ịgakwuru onye nsọ a onye nwere ike inyere anyị aka idozi ọnọdụ ndị siri ike.
Ọnọdụ siri ike na ndụ ọrụ nwere ike bụrụ ọnọdụ nke ụzọ kacha mma ị nwere ike isi kwụsị bụ ịhapụ ịhapụ ọrụ na-enweghị isi.
San Charbel nwere ike inyere anyị aka pụọ ​​na nghọtahie ọ bụla, nke a na-ahụkarị na gburugburu ebe ọrụ, n'agbanyeghị ihe isi ike.
Ekpere ndị ahụ siri ike ma n'ọnọdụ ọrụ a ọ dị mma ịme ha tupu ịmalite ụbọchị ga-enye, n'ụzọ nke a, mkpọtụ ọjọọ ahụ ga-apụ ma nwee ike ịchịkwa ọnọdụ ya ka ọ bụrụ na ọnọdụ ebilite, enwere ike ijizi ya n'ụzọ kacha mma .
Ekpere Saint Martin Knight